I-Toledo Pact: Yini okwavunyelwana ngayo futhi yamukelwa nini | Ezezimali Zomnotho
UClaudi Casal | 28/07/2021 11:51 | Umnotho jikelele
Kukangaki sizwa ngeToledo Pact nomphumela wayo empeshenini? Lo mbhalo obukade ulindelwe futhi othathe iminyaka eminingana ukuwubhala, wagcina uvunyelwe ngo-Okthoba 2020. Kungumbiko wokuguqulwa kohlelo lwempesheni yomphakathi okubandakanya izincomo ezingama-22 kudalwe isethi yamaqembu ezepolitiki. Lokhu kuyizihluthulelo zokwenza inguquko ethenjisiwe yempesheni obekuyisikhathi eside isetafuleni ukuze kube nempikiswano. Hhayi amaqembu ezepolitiki kuphela azonquma ngezinguquko ezivunyelwe, kepha nezinyunyana nabaqashi ngezingxoxo.
Ukuze kucaciswe konke okuvunyelwene ngakho ku-Toledo Pact nokuthi kuthinta kanjani izimpesheni, sizokwenza isifinyezo esifushane ngesiphakamiso ngasinye esivunyelwe yiKhomishini yePhalamende. Ngaphezu kwalokho, sizobeka usuku oluqondile lokuvunyelwa kwalo mbhalo. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngePoledo Pact, qhubeka ufunde.
1 Yini eyavunyelwana ngayo eToledo Pact?
1.1 Incomo 0: Ukuvikelwa kohlelo lomphakathi
1.2 Incomo 1: Ukwehlukaniswa kwemithombo
1.3 Incomo 2: Isukuma ne-CPI
1.4 Incomo 3: 'Ibhokisi lemali yempesheni'
1.5 Incomo 4: Quote Freelance
1.6 Incomo 5: Izinkathi zokuhweba
1.7 Incomo 6: Izikhuthazi zomsebenzi
1.8 Incomo 7: Imininingwane yesakhamuzi
1.9 Incomo 8: Ukuphathwa kohlelo
1.10 Incomo 9: Ama-Mutual of Social Security
1.11 Incomo 10: Ukulwa nokukhwabanisa
1.12 Incomo 11: Nobabili ninikela kakhulu enikutholayo
1.13 Incomo 12: Isikhathi sokuthatha umhlalaphansi
1.14 Incomo 13: Ubufelokazi nobuntandane
1.15 Incomo 15: Uhlelo olwanele
1.16 Incomo 16: Izinhlelo ezihambisanayo
1.17 Incomo 17: Abesifazane
1.18 Incomo 17 bis: Intsha
1.19 Incomo 18: Abantu abakhubazekile
1.20 Incomo 19: Abasebenzi bokufika
1.21 Incomo 19 bis: Ukufakwa ekhompyutheni
1.22 Incomo 20: Ukulawulwa KwePhalamende
2 Sivunyelwe nini isivumelwano seToledo?
Yini eyavunyelwana ngayo eToledo Pact?
IToledo Pact idume ngobuhlobo bayo nezimpesheni, inkinga ekhathaza ingxenye enkulu yabantu baseSpain. Phakathi kwezinyathelo ezaziwa kakhulu ezibekwe yiKhomishini yePhalamende ngu ukugcinwa kwamandla okuthenga kwabahola impesheni ngokomthetho. Lokhu kuvuselelwa unyaka nonyaka ngokususelwa ku-CPI yangempela (Inkomba Yamanani Abathengi). Kodwa-ke, kunezincomo eziningi ezengeziwe ezenziwe yi-Toledo Pact, empeleni kukhona ezingama-22 sezizonke. Ngokulandelayo sizokwenza isifinyezo esincane sokuqukethwe ngakunye kwabo.
Incomo 0: Ukuvikelwa kohlelo lomphakathi
Ukuqala uhlu ngezincomo 0 ezihlobene nokuvikelwa kohlelo lukahulumeni, iToledo Pact iyaqinisekisa ukuthi izogcina ukuzibophezela kwayo ekulondolozeni nasekuthuthukiseni uhlelo lomphakathi lwezokuphepha komphakathi, inake kakhulu uhlelo lwempesheni. Umqondo ngukuthi iminikelo yezenhlalakahle iyaqhubeka nokuba ngumthombo oyisisekelo ngokuya kwezimali zezinzuzo ezinikelwayo. Ngaphezu kwalokho, izinsizakalo zomhlaba wonke nezinzuzo ezinganikeli zizokhokhelwa ngeminikelo yoMbuso Kwezokuphepha Komphakathi.
Incomo 1: Ukwehlukaniswa kwemithombo
I-Toledo Pact ihlose ukuqeda ukusilela okukhona kwe-Social Security ngo-2023. Ngaphezu kwalokho, ugcizelela ekubalulekeni kokudlulisela kubantu ukuthi ingxenye enkulu yalokhu kusilela kungenxa yokucatshangelwa kwezindleko ezithile ezingafanele. Ngamanye amagama, bekungafanele ukuthi bakhokhelwe ngeminikelo yokuphepha komphakathi.
Isiphi isixazululo esiphakamiswa yikhomishini? Ngokusho kwakhe, lezi zindleko ezingafanele kufanele babe yisibopho seziMali ezijwayelekile zikaHulumeni. Ngale ndlela babezoxhaswa ngemali yentela ejwayelekile. Lezi ezinye zezibonelo zalokho okubandakanya:
Usizo ezinkampanini ezitholwe ngenxa yokwehliswa komnikelo Wokuphepha Komphakathi.
Izilinganiso eziphansi, phakathi kokunye, zokuphathwa okuhle ngesikhathi sokucaphuna.
Izinzuzo ezihlobene nokunakekelwa kwabancane nokuzalwa.
Isengezo sokubeletha maqondana nempesheni.
Incomo 2: Isukuma ne-CPI
Yini i-CPI? Kuyinkomba yentengo yomthengi. Kuyinkomba ekala ukuthi amanani ezimpahla nezinsizakalo ahluka kanjani ngesikhathi esithile endaweni ethile. Kulokhu, bekuvele kunesivumelwano sokuqala sonyaka we-2018. Le ndlela yokubuyekezwa kwempesheni evunyelwe nguRajoy ibangela ukwanda minyaka yonke kuka-0,25%.
ISivumelwano SaseToledo siphinda ekuncomeni kwaso 2 ukuvikela lokhu okulandelayo: ikusasa ". Kuchaza nokuthi noma ikuphi ukwenyuka kwempesheni okungaphezu kwe-CPI kufanele kuxhaswe ngemali ekhokhwayo yezinye izinsiza zezezimali akuhlobene nokuPhepha Komphakathi.
Incomo 3: 'Ibhokisi lemali yempesheni'
Olunye udaba okukhulunywe ngalo kuToledo Pact yilokho okubizwa ngokuthi yibhokisi lemali yempesheni, elibhekise kwiReserve Fund. Ngesikhathi sokugunyazwa kukaRajoy, lokhu kwakhitshwa u-90%. Lapho nje ibhalansi yama-akhawunti wokuPhepha Komphakathi itholakele, I-Toledo Pact iphakamisa ukuthi imali esele yeminikelo ifakwe futhi eSikhwameni Sokulondoloza futhi isungule imali encane esalayo kuyo.
Ngaphezu kwalokho, iveza ukuthi lesi sikhwama asisebenzisi ukuxazulula ukungalingani kwezezimali ubunjalo bazo buyisakhiwo. Noma kunjalo, yebo kungaba njalo usizo olubalulekile uma kuziwa ekuxazululeni ukungalingani kwemijikelezo lokho kungenzeka phakathi kwezindleko nemali engenayo evela ku-Social Security.
Incomo 4: Quote Freelance
Mayelana nokuvikelwa komphakathi kwabazisebenzelayo, iToledo Pact iphakamisa ukuthi kusungulwe izindlela ezivumela ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi kanye nokusebenza itoho. Ngokusho kweKhomishini, ukusimama kwempesheni kudinga lokho umnikelo wabaqashile usondela kumholo wabo wangempela kancane kancane. Kodwa-ke, uveza ukuthi leli phuzu kumele kuxoxiswane ngalo nabaqashi nezinyunyana.
Incomo 5: Izinkathi zokuhweba
Isincomo 5 siphathelene nezikhathi zokuhweba. Mayelana nalokhu, kugcinwa iminyaka eyi-15 njengesikhathi esiphansi sokunikela ukuze sikwazi ukuthola impesheni Yezokuphepha Komphakathi kanye nokwengezwa kwayo okuqhubekayo kube yiminyaka engama-25. Kodwa-ke, njengencane kufaka phakathi iToledo Pact leyo abantu bangakhetha leyo minyaka engama-25 ngendlela yokuthi bathandwe kakhulu ngesikhathi sokuqoqa impesheni.
Mayelana nabantu abaphila isikhathi eside, isisombululo esinikezwa yiKhomishini yile ukuthi bangalahla unyaka othile noma bakhethe isigaba somsebenzi wabo wokuhweba ukubala impesheni.
Isincomo 6: Izikhuthazi zomsebenzi
Mayelana nokuxhaswa ngemali kwezikhuthazo zokuqashwa, iToledo Pact ikubeka lokho Azinakwenziwa ngemali ekhokhwayo kwiminikelo yomphakathi. Ngalesi sizathu, itusa ukuthi zisetshenziswe kuphela njengethuluzi elihlukile futhi emaqenjini nasezimweni okufanele zithande ukwenziwa, njengabantu abakhubazekile noma abasengozini yokuvalelwa ngaphandle emphakathini, abangasebenzi abebengasebenzi isikhathi eside nezisulu udlame. ubulili, isibonelo.
Incomo 7: Imininingwane yesakhamuzi
Isincomo sesi-7 solwazi lwezakhamizi sinxusa uHulumeni ukuthi ahambisane nezibopho zakhe zolwazi ezinikezwe ku-athikili 17 yoMthetho Jikelele Wezokuphepha Komphakathi. Ngale ndlela, isakhamuzi ngasinye saseSpain sizokwazi ukuthola ulwazi ngezikhathi ezithile nangomuntu ngamunye mayelana namalungelo abo empesheni esizayo.
Incomo 8: Ukuphathwa kohlelo
Kunconyiwe futhi mayelana nokuphathwa kohlelo lwe-Social Security uqobo. Ngokwe-Toledo Pact kunesidingo esiphuthumayo sokuqinisa, ukuthola kabusha nokuvuselela abasebenzi futhi ngaleyo ndlela sifinyelele ekuphatheni ngempumelelo nangempumelelo.
Incomo 9: Ama-Mutual of Social Security
Izinkampani zomshuwalense mutual ezihlobene ne-Social Security nazo ziyavela ku-Toledo Pact. Mayelana nabo, izincomo ziphakamisa okulandelayo:
Thobela umthetho wobunye maqondana nokwakhiwa kwezigungu zawo ezilawulayo.
Banikeze inani elithile lokuguquguquka maqondana nokusetshenziswa kwezinsizakusebenza zayo, kepha kufanele ihambisane nokulawulwa okuqinile okwenziwa yi-Social Security.
Thuthukisa kokubili ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza kanye nokuhlangenwe nakho kokuhlanganyela, ikakhulukazi maqondana nezinsizakalo zokuhlukumezeka.
Incomo 10: Ukulwa nokukhwabanisa
Udaba olubalulekile ezweni lethu ukukhwabanisa. Isivumelwano iToledo sigcizelela ukubaluleka kwe- qinisa ukulwa nokukhwabanisa, okubuye kube nomthelela ekuvikelekeni komphakathi. Ngale njongo iphakamisa izixazululo ezimbili:
Cacisa izikhala zomthetho (Lokhu kuzovimbela, ngokwesibonelo, amacala okuzisebenza okungelona iqiniso).
Yenza kube nzima ukuphatha unswinyo kulezo zinkampani ezingathobeli izibopho abanazo maqondana nokuPhepha koMphakathi.
Incomo 11: Nobabili ninikela kakhulu enikutholayo
Isincomo se-11 siphathelene nokunikela. Ngamanye amagama: ubudlelwano phakathi kwenani lenzuzo nomzamo wokunikela wesisebenzi ngasinye. Ngokuyisisekelo baphikelela futhi ngokuthi, ngokuqeda iminyaka noma ukukhetha isikhathi, abantu bangathandelwa uma kukhulunywa ngokuqoqa impesheni. Ngale ndlela, labo abathinteke enkingeni yokugcina ekugcineni kwempilo yabo yokusebenza, impesheni yabo ngeke ijeziswe.
Incomo 12: Isikhathi sokuthatha umhlalaphansi
Mayelana neminyaka yokuthatha umhlalaphansi, IKhomishini ivikela ukuthi lokhu kufanele kusondele ngangokunokwenzeka eminyakeni yobudala ethathe umhlalaphansi. Ukufeza lokhu, kufanele ngokuzithandela unwebise impilo yakho yokusebenza, weqe iminyaka yobudala yokuthatha umhlalaphansi. Ngaphezu kwalokho, iToledo Pact igcizelela iziphathimandla zomphakathi ukuthi zinake kakhulu izimo zokuba sengozini ezingalethwa yilesi sincomo emaqenjini athile. Okunye ukugcizelela kwesiVumelwano ukuthi ukufinyelela ekutholeni umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi kubuyekezwa ukuze ama-coefficients ancishisiwe ahlale elingana.
Incomo 13: Ubufelokazi nobuntandane
Kokubili ukuba ngumfelokazi kanye nezinzuzo zezintandane kuzoqhubeka nokuba nomthelela, kepha iKhomishini iphakamisa uvumelanise impesheni nezimo zomndeni nezenhlalo kanye nezimo zezenhlalo nezomnotho zabantu abahlomulayo. Ngale ndlela izama ukwenza ngcono ukuvikelwa kwabahola impesheni abangenazo ezinye izinsiza kusebenza. Kubantu abaneminyaka engaphezu kwengama-65 abathola impesheni yomfelokazi, iToledo Pact ibheka ukuthi iphesenti lesisekelo sokulawula kufanele lenyuswe, ngoba kungenzeka ukuthi lingumthombo wabo omkhulu wokuthola imali. Mayelana nempesheni yezintandane, uhlongoza ukuzithuthukisa, ikakhulukazi imali.
Incomo 15: Uhlelo olwanele
Ngokwesincomo se-15, iKhomishini ivikela ukuthi uhlelo lwempesheni yomphakathi kanye nokusungulwa okwanele okufanayo kuyasekela. Ukufeza le ncazelo, kubheka kufanelekile ukusungula izinkomba ezithile ezifanele, njengezinga lokushintshwa. Lokhu kuhlobanisa impesheni emaphakathi nomholo omaphakathi wabo bonke abasebenzi. Ngakho-ke, ukwenziwa okuqhubekayo kokuvela kwemvelo kungenziwa, futhi uma kwenzeka kuphambuka kuzovumela ukwamukelwa kwezinyathelo ezibhekwa njengezifanelekile. Yini enye, iKhomishini isekela ukunakekelwa kwamanani aphansi empesheni nokuthi izithasiselo zalezizilinganiso ezincane kumele zithathwe yizintela, okusho ukuthi, yi-General State Budget, esikhundleni seminikelo yomphakathi.
Incomo 16: Izinhlelo ezihambisanayo
IToledo Pact incoma ukuthi kusetshenziswe izinhlelo zempesheni ezengeziwe, ikakhulukazi lezo zomsebenzi. Lezi kumele zingabi nzuzo futhi bangaphansi kombuso ohlukile wezomthetho kanye nowezimali. Lokhu kuzothuthukisa umbuso wamanje futhi kuvikele lezi zinhlelo zokonga ukuthi zingathathwa njengemikhiqizo yezezimali.
Mayelana nezinhlelo zempesheni ngazinye, iToledo Pact iyakugcizelela lokho lokhu kufanele kube sobala ngokwengeziwe. Ngale ndlela, izindleko zokuphatha bezingeke zisho ukubuyiselwa okungalungile kwabasindisa imali.
Incomo 17: Abesifazane
Isincomo esithile sabesifazane besingalahleki. IKhomishini ifuna ukuthi kuqinisekisa ukulingana emsebenzini kanye nasezimpeshenini. Lokho kusho ukuthi: Kuyabona ukuthi namhlanje kusenezikhala zobulili. Ukuze ulwe nabo, iToledo Pact iphakamisa okulandelayo:
Bhekisisa inkinga yokunakekelwa ukuze imisebenzi yobungcweti yabo bonke labo abanabanye abantu ababondlayo abaphethe ungakhi izikhala zokunikela ngenxa yalesi sizathu.
Thuthukisa ukubambisana usebenzisa amathuluzi athile, njengezimvume zabazali.
Dala izinyathelo ezivumelayo ukukhomba ukubandlululwa kwemiholo.
Faka uhlobo lwezilungiso ukugcwalisa izikhala ekubhaliseni imisebenzi okudalwa ukungahambi kahle emisebenzini yobungcweti, njengokuqashwa ekhaya.
Sebenzisa izinguquko ezinhloso yazo ukwelashwa okulungile okubandlululayo nabasebenza amatoho.
Incomo 17 bis: Intsha
Yentsha, iToledo Pact iyabuza ukuthi izimo zabo zokusebenza zenziwe ngcono. Le yindlela ezama ngayo ukukhulisa ukuzethemba kwaleli qembu ohlelweni Lokuvikeleka Komphakathi. Kuze kube manje, iphakamisa ukwamukelwa kwezinyathelo zomthetho ezicacile ezinhloso yazo hhayi nje kuphela ukuqinisekisa, kodwa futhi nokwenza ngcono ukuvikelwa komphakathi kwabaphethe izifundi.
Isincomo 18: Abantu abakhubazekile
Mayelana nabantu abakhubazekile, iToledo Pact ithi Zonke izindlela ezinhloso yazo ukususa izithiyo ukuze laba bantu bakwazi ukuthola umsebenzi osezingeni elifanele kumele ziqiniswe.. Ngalesi sizathu, iyagcizelela ukuthi umthetho kufanele ukhuthaze ukugcinwa kwemisebenzi yobungcweti yabantu abakhubazekile futhi wenze lula ukufakwa kwabo.
Incomo 19: Abasebenzi bokufika
Esinye isincomo seToledo Pact sithi kuvuna ukufika kwabokufika ngokusemthethweni. NgokweKhomishini, lezi ziqinisa uhlelo lwempesheni, ngoba abantu baseSpain bayaguga. Umbono wakhe ukudala izindlela ezibandakanya abokufika emakethe yezabasebenzi. Sebenzisa lesi sincomo ukumemezela ukuthi Abaphathi kufanele baqinise imizamo yabo yokuvimbela ukucwasana ngokwebala, ukucwaswa nokuxhashazwa emsebenzini.
Incomo 19 bis: Ukufakwa ekhompyutheni
Yize ukwenziwa kwedijithali kungenakugwemeka esikhathini esiphila kuso, iToledo Pact ixwayisa ngokuthi ingathinta ukuhleleka kobudlelwano bezabasebenzi kanye nokuhlelwa komsebenzi. Bagcizelela ukuthi kubalulekile thokozela ukufakwa kwabo bonke abasebenzi ngaphakathi kohlelo. Ngale ndlela, kuhlongozwa ukulwa nomnotho ongakahleleki kanye nokuqinisekisa ukuvikelwa ezimweni ezidinga usizo.
Ngakolunye uhlangothi, iKhomishini iyabona ukuthi kunengozi yangempela yokuthi ukuvikelwa komphakathi okunikela kuzobe kunganele. Lokhu kungenxa yokuthi ubudlelwano babasebenzi bamapulatifomu edijithali buvame ukuba ngezikhathi ezithile futhi buhlale bukhona. Ngalesi sizathu, kuncoma ukuthi izindlela ezibhekwa njengezinganikeli kufanele ziqiniswe. Ukuphikisana nokwehliswa kwemali engenayo Yezokuphepha Komphakathi ebangelwe ukwenziwa kwedijithali, iToledo Pact iyaphikelela ukuncika okulungile kwiminikelo yomphakathi, selokhu isimo sokukhiqiza kanye nesibalo sabantu sishintshe kakhulu emashumini eminyaka adlule.
Incomo 20: Ukulawulwa KwePhalamende
Ekugcineni bakhuluma ngokulawulwa kwephalamende. Ngalo msebenzi, IKhomishani Yokuqapha Nokuhlola Izivumelwano Zezivumelwano ZaseToledo isungulwe unomphela futhi uHulumeni kumele azise minyaka yonke ngesimo okuso iSecurity Social. IToledo Pact igcizelela ukubaluleka kokuqinisa ukuqapha imiphumela etholakele ekulweni nenkohliso, ibhalansi yezezimali yohlelo kanye nokwanela kwempesheni.
Sivunyelwe nini isivumelwano seToledo?
Ngemuva kwemihlangano ethathe iminyaka engaphezu kwemine, Ekugcineni, okubizwa ngeToledo Pact kwavalwa ngo-Okthoba 23, 2020. Kuthathe izingxoxo eziningi ukuze ikhomishini yasePhalamende igcine ifezekisile inhloso yayo: ukudala umhlahlandlela wohlelo lwempesheni yomphakathi. Bazokwamukela izincomo ezingama-22, kepha iToledo Pact ikhumbule ukuthi eminyakeni emihlanu ngemuva kokuvunywa kwayo, "iCongress of Deputies kuzofanele iqhubeke nokubukeza kabanzi izincomo zeToledo Pact, kanye nokuhlaziywa. kwezinga lokuthobela, ngokusebenzisa izinsimbi ezithile zephalamende zale nhloso ”.
Ngiyethemba ukuthi manje usucaciselekile ngakho konke okushiwo yiToledo Pact, okungenani ngamafuphi. Ungangishiya umbono wakho kumazwana.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Isivumelwano seToledo